Ahoana no mba haka ny tsara bodofotsy ho an'ny ny fandrianao.
Mari-pana rehefa alina maka nianjera, tonga ny bodofotsy hanampy fanampiny sosona Cozy hafanana ny ny fandrianao. Bodofotsy mirona ho any tsy hita maso sy ny mpahalala - izany ny Mpampionona na duvet izay mitaky ambony billing tahaka ny kintan'ny am-pandriana, ary ny taratasy izay manome ny safosafo ny malemy ilay manjarano ny hoditrao te hihinana, saingy ny bodofotsy, tucked eo anelanelan'ny roa, izay mahatonga fanampiny paosy ny rivotra mafana mba hiaro anao.
Raha ny hividy ny bodofotsy , dia mety hieritreritra misy na inona na inona ho azy - misafidy fotsiny ny loko tianao ao amin'ny haben'ny tsara noho ny kidoro. Na dia ny fisafidianana ny tsara bodofotsy dia somary tsotra, misy kely kokoa ho azy noho izany.
Fidio ny Tsara Size
Raha toa ianao mividy bodofotsy noho ny fandrianao, dia mila lehibe iray ampy handrakotra ny kidoro amin'ny santimetatra vitsivitsy mba tuck fanampiny ao manodidina amin'ny lafiny roa sy ny ambany. Na dia marina habe Miovaova arakaraka ny mpanamboatra ny mpanamboatra, bodofotsy habeny mahazatra (ny halavany amin'ny sakany) dia:
· Full / Queen: 90 "X 85"
· Mpanjaka: 90 "X 110"
Fidio ny Tsara Fabric
Ity amin'izay mahazo kely trickier. Misy olona maro bodofotsy iombonana lamba - tsirairay dia samy manana tombontsoa, ​​noho izany dia fidio ny tsara indrindra izay tiany ny zavatra ilaina.
Cotton : Cotton bodofotsy mihazona ny tsara ny miverimberina fanasana, hany ka lasa safidy tsara ho an'ireo izay mijaly amin'ny allergie na tsy fahazakana. Arakaraka ny Miahy, landihazo dia mety ho ampy ho an'ny fampiasana maivana toy ny bodofotsy vanin-taona mafana, na mavesatra ampy ho an'ny ririnina hafanana.
Misy mihitsy aza organika landihazo bodofotsy ho an'ireo izay misafidy ny fomba fiaina maitso.
Volon'ondry : volon'ondry dia mavesatra, mafana, ary manome insulation tsara raha mamela ny hamandoana ho lasa etona. Tena tsara izany safidy raha te tena mavesatra, bodofotsy mafana, fa ny sasany no mahazaka olona, na mora tohina amin'ny volon'ondry fotsy.
Down : Similar ny nidina mpampionona , fa thinner sy maivana, nidina bodofotsy manana sosona ny volony izy na synthetic mpisolo toerana teo anelanelanay sosona ny lamba.
Ireo bodofotsy dia maivana nefa tena mafana. Raha toa ianao ka mahazaka ny volom-borona, dia azo antoka ny mifidy ny synthetic mahasolo.
Cashmere : tarehy sy malefaka, cashmere bodofotsy ho mafana sy silky, fa tena lafo ihany koa.
Synthetics : Maro ny lamba synthetic ampiasaina amin'ny bodofotsy: acrylic, polyester sy ny microfiber Fahita ireo. Synthetic bodofotsy ho mafana, fa matetika no misarika tsara voasakantsakan'ny fifanarahana ny herinaratra, ary mirona amin'ny hihazona tao volo, vovoka sy hamaha kofehy. Synthetics lafo ihany koa ny foto-kevitra ny pilling ary manao. Ary tamin'ny lafiny ampiana, bodofotsy ireo amin'ny ankapobeny lafo.
Volon'ondry : Cozy, fanampiny fitiavana, nefa tsy dia mavesatra, volon'ondry sy ny microfleece bodofotsy no tena malaza amin'ny ankizy. Volon'ondry tsara amin'ny wicking lasa hamandoana - soa iray hafa rehefa ampiasaina amin'ny ankizy iray ny fandriana.
Vellux : Indraindray dia antsoina hoe "trano fandraisam-bahiny bodofotsy," Vellux bodofotsy manify misy ny sombin-javatra fototra voahodidina malefaka nylon plush amin'ny velvety mihasimba. Ireo bodofotsy no hypoallergenic, mitsangana ho imbetsaka ny fanasana na dia avo mari-pana, ary mafana ary tena malefaka. Ny safidy lehibe ho an'ny olona amin'ny allergie na tsy fahazakana.
Ahoana ny manenona?
Miaraka amin'ny lamba samy hafa, bodofotsy manana weaves samihafa izay manome sehatra samihafa ny hatsaram-panahy sy ny lanjany.
Mafana : Amin'ny ankapobeny hita ao amin'ny landihazo bodofotsy, ny mafana Miahy dia tsy mifatotra, namela rivotra mivezivezy mora foana. Ireo bodofotsy maivana tsara ny vanin-taona mafana.
Raiki-pitia : Cozy raiki-pitia bodofotsy mavesatra sy mafana. Matetika ianao mahita ireo vita amin'ny volon'ondry na sentetika.
Quilted : Down bodofotsy dia matetika quilted hitandrina ny hidina na nidina avy miovaova mpisolo toerana ao anatin'ny bodofotsy.
Mahazatra : Ny fanaon'ny bodofotsy Miahy Tena mafy sy akaiky, famoronana tsara indrindra ho an'ny vatana insulation hafanana.